Dawlada Ethiopia oo Waydiisatay Dalka Ingriiska Soo Celinta Dambiileyaal – Rasaasa News
Dawlada Ethiopia oo Waydiisatay Dalka Ingriiska Soo Celinta Dambiileyaal
Jun 30, 2011 aamiyeen in ururo saddex ah oo Ethiopian ah iyo laba urur oo caalami ah, Dawlada Ethiopia oo Waydiisatay Dalka Ingriiska Soo Celinta Dambiileyaal, Dhawaan ayey Baarlamaanka dalka Ethiopia go, kuwaas oo kolkii la baadhay ficilada ay ka sameeyaan Ethiopia ay yihiin falal argagixisanimo., OLF iyo Gimbot 7, u aqoonsadeen argagixiso. Ururadaas oo ay ka mid yihiin; ONLF
Addis Abab, June 30, 2001 [ras] – Wasaarada Arimaha dibada ee dalka Ethiopia, ayaa si xushmad leh u waydiisatay dalka Ingriiska, in ay gacanta u soo galiso dambiileyaal ay Ethiopia raadinayso si maxkamad loo saaro.
Waxaa jira heshiisyo gaar ah oo ka dhaxeeya dawladaha qaarkood oo ku saabsan in la isu celiyo dambiileyaasha. Ethiopia iyo dalka Ingriiska hore ugama dhaxaynin heshiiska noocaas ah ee loo yaqaan [extradition].
Laakiin waxaa jira shaci caalami ah oo la sameeyey sanadkii 2002, oo loogu talo galay in lagu xakameeyo fidida dhibaatooyinka argagixisada. Sharcigaas ayaa odhanaya dad falal argagixiso ka gaystay dal, kuma noolaan karaan dal kale, waana in dib loogu celiyaa dalka u haysta falka argagixisonimo.
Sharcigaas ayaa dawlada Ethiopia u ogolaanaya in ay waydiisato dalka Ingriiska, dad ay la xidhiidhinayso in ay falal argagixisonimo ka sameeyaan dalka Ethiopia, kuwaas oo degan dalka Ingriiska.
Dhawaan ayey Baarlamaanka dalka Ethiopia go,aamiyeen in ururo saddex ah oo Ethiopian ah iyo laba urur oo caalami ah, u aqoonsadeen argagixiso. Ururadaas oo ay ka mid yihiin; ONLF, OLF iyo Gimbot 7, kuwaas oo kolkii la baadhay ficilada ay ka sameeyaan Ethiopia ay yihiin falal argagixisanimo.
Hogaamiyaha Gimbot 7, oo ku nool dalka Maraykanka ayay Ethiopia codsatay soo celintiisa, ayey dawlada Maraykanku ka gaws qabsatay, walina waxaa socota wixii ay ka yeeli lahayd dawlada Maraykanku arinkan.
Ninka ay codsatay Ethiopia oo magaciisa la yidhaahdo Berhanu Nega, ayaa aas aasay madaxna u ah Gimbot 7. Dawlada Ethiopia ayaa hore ugu xukuntay isaga oo maqan dil, waana arinta ay dawlada Maraykanku ka walaacsan tahay.
Waxaa la filayaa in Maraykanku ay yeeli doonaan wax aan xumaynin xidhiidhka labada dal ee saaxiibka ah, loona masaafuriyo Berhanu Nega dal sadexaad.
Wali ma aanaan helin magacyada dadka ay dawlada Ethiopia ka codsatay dalka Ingriiska in loo soo celyo, waxaase loo malaynayaa in uu yahay Admiral Maxamed Cumar Cismaan.
Jwxo-shiil iyo Mr. Qaaxo oo Melbourne u Qaxaaya!